Real Madrid oo soo reebtay Bayern Munich iyo ciyaarahii kale ee maanta dhacay – Mogadishutimes
Real Madrid oo soo reebtay Bayern Munich iyo ciyaarahii kale ee maanta dhacay
Real Madrid oo markii 7aad oo xiriir ah usoo gudubtay wareega afar dhamaadka Champions league-ga. Kooxaha Real Madrid iyo Bayern Munich ayaa wada ciyaaray kulan aad u xamaasad badan oo ka tirsanaa lugtii 2aad ee wareega 8 dhamaadka tartanka champions league-ga.
Cristiano Ronaldo ayaa Bayern Munich saddexley ka dhaliyay waxaana goolka kale raacsaday da’yarka Marco Asensio waxayna Bavarianku sidaas uga hareen Champions league-ga.
Labada kooxood ayaa qaybtii hore ee ciyaarta isku dayay in ay dhaliyaan goolal kadib markii ay sameeyeen fursado fiican oo goolal lagu dhalin karo laakiin midkoodna umay suurto galin.Bayern Munich ayaa ciyaarta ku bilaabatay qaab weerar ah waxayna dhibaato badan ku abuureysay daafaca Real Madrid.
Real Madrid ayaa ciyaarta si qunyar socod ah ugu soo laabanaysay waxeyna isku dayeysay in ay natiijada ciyaarta si taxadar leh u ilaashadaan isla markaana ay weeraro rogaal celis ah qaadaan marka ay kubbada dib u helaan.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaan wax gool ah la iska dhalin walow fursado badan ay iska lumiyeen labada kooxoodba.
Qeybtii danbe marki la isku soo laabtay Bayern Munich ayaa dardar ku bilaabatay.
Daqiiqadii 51aad Casemiro ayaa goolkulaad ku keenay kooxdiisa kadib markii uu qalad ku galay Arjen Robben oo kubbada xerada ganaaxa Real Madrid kula dhexjiray wuxuuna garsooruhu si aan shaki lahayn uu markiiba tilmaamay regoore uu Bayern Munich ku abaal mariyay.
Daqiiqadii 52aad Robert Lewandowski oo usoo istaagay tuuris goolkulaad kii loodhigay ayaa gool u badalay wuxuuna jaha qaldan u diray goolhaye Keylor Navas.
Bayern Munich ayaa sii wadatay qaab ciyaareedka duufaanta ah oo ay ku raadineysa iney hogaanka ciyaarta ku dheereysato.
Daqiiqadii 76aad C. Ronaldo oo caawin ka helay Carlos Henrique Casamiro ayaa Real Madrid u bar-bareyay wuxuna ciyaarta ka dhigay 1-1.
Daqiiqadii 78aad gool iska dhaliyay Sergio Ramos ayey Bayern Munich mar labaad hogaanka ciyaarta kula wareegtay .
Daqiiqadii 84aad Arturo Vidal ayaa gudoomay kaarkiisii 2aad ee digniinta kadib qalad uu ku galay da’yarka Marco Asansio garsoore Victor Kassai ayaana ciyaarta ka saaray.
Ciyaarta ayaa waqtigii loogu tala galay kusoo dhamaatay 2-1 oo ay Bayern Munich ku hogaamineysay waxaana loo baahday in 30 daqiiqo lagu daro.
Daqiiqadii 105aad C. Ronaldo ayaa mar labaad shabaqa kasoo taabtay Bayern Munich kadib caawin uu ha helay Sergio Ramos wuxuuna ciyaarta ka dhigay bajeero 2-2 ah.
Daqiiqadii 110aad Marcelo Vieira Da Silva ayaa ka caawiyay C. Ronaldo inu dhameystiro sadexley.
Daqiiqadii 112aad muluqa Marco Asansio ayaa bandhigii goolasha Ronaldo gool ku darsaday. Ciyaarta oo aheyd mid murano hareeyeen ayaa waxey kusoo idlaatay 4-2 oo ay guushu ku raacday Real Madrid.
Atletico Madrid vs Leiscester City
Kulan kale oo loogu soo baxayay wareega afar dhamaadka ka Champions league-ga ayaa wuxuu dhex maray kooxaha Leicester City iyo Atletico Madrid waxeyna ku kala baxeen bareejo 1-1.
Atletico Madrid oo iyadoo marti aheyd ayaa goolka ku hormartay daqiiqadii 26aad waxaana u dhaliyay Saul Niguez.
Qeybtii hore ee ciyaarta waxaa lagu kala nastay 0-1 oo ay hogaanka ku heysay Los Rojiblancos.
Qeybtii dambe ee ciyaarta daqiiqadii 61aad The Foxes ayaa bareejeysay ciyaarta waxaana gool u dhaliyay Jamie Vardy. ciyaarta ayaana kusoo dhamaatay 1-1.
Waxaa sidaas kusoo baxday Atletico Madrid oo iyadu gurigooda hal iyo eber kuso garaacday Leicester City.